Doodda ku saabsan Magta Dumarku waxay mareysaa meel sare. Looma baahna hebel baa sidaa yiri iyo heblaa sidaa tiri ee waxa loo baahan yahay DALIIL SHARCI ah.
Waxaa dhowaan xilkii laga qaaday Gudoomiyaha Guddiga Wanaag Farista iyo Xumaan Reebista Somaliland, Sh.Maxamed Xaaji Xiirey, ka dib markii 8dii Maarso uu ka sheegay Raadiyow Hargeysa inaanay jirin aayad iyo xadiis kala badinaya magta raga iyo ta dumarka. Wuxuu kaloo Shiikh Xiirey ku celceliyey in cidii daliil haysaa ay keento. Arintaas ayaa xiisad ka abuurtay magaalada Hargeysa iyadoo weliba Shiikhuna xilkiisii ku waayey.
Waxaa meel walba soo fadhiistay culimo ku doodaysa in aanay ragga iyo dumarku ka sinnayn xaga magta, iyagoo daliishana aayadihii dhaxalka iyo markhaatiga ee cadaynayey in dumarku ay ragga badhkood yihiin markay noqoto markhaatiga iyo dhaxalkaba, taasna laga qaadanayo iney magtuna la mid tahay. Culimada sheegaya in magta raggu ka badan tahay tan dumarka waxaa ugu cod dheeraa Sh. Aadan Sunne oo sheegay in Sh. Xiirey la yimi wax lala yaabo.
Laakiin Sh. Xiirey oo wareysi siiyey wargeyska Haatuf ayaa difaacay mowqifkiisa, wuxuuna sheegay in dadka diidan in magta ragga iyo ta dumarku siman yihiin ay ku guul dareysteen inay daliil keenaan.
"Waxay ku warwareegayaan markhaatiga iyo dhaxalka oo labadaba aayado quraan ahi ka hadleen, aniguna waxaan ka hadlayaa magta oo ah dhiiga qofka, Ilaahayna wuxuu yiri nafta naf ayaa loo dili, hadaanay sineyn laysuma dileen" ayuu ku dooday Sh. Xiirey.
Waxa muuqda wadaadada kala sareysiinaya magta in aanay soo bandhigin wax cad oo ay arinka Sh. Xiirey sheegay ku xaraamaynayaan, taasoo u muuqata in dooda hadda socota uu gacanta sare leeyahay Sh. Xiirey oo sheegaya inaan xadiis iyo aayad midna loo hayn magta dumarka ee 50 halaad laysaga qorsheeyey. Maaha in lagu warwareego Dhaxalka iyo Markhaantiyada, waxa laga hadlayaa waa Magta. Qof bani'aadmi ah marka la dilo, nafta naf baa loo dilaa.
Seyida Reexaana Balqiis Bint Jacfar AlMakhzuumi